दिन रिजर्व र राष्ट्रिय पार्कहरू को। कहिले र कसरी यो छुट्टी मनाउन?
धरती मा, त्यहाँ मानिसको हात छोएको छैन भनेर धेरै केही ठाउँ हुन्। मान्छे ग्रह मा आफ्नो प्रभाव हरेक वर्ष थप विनाशकारी बन्ने छ भन्ने महसुस मन। भविष्यमा सन्तान लागि यसको मूल रूप मा पृथ्वी सुरक्षित गर्न, आफ्नो वनस्पति र जीव, को धेरै पार्क र संरक्षण क्षेत्रमा छन्।
प्रदूषण गर्न subjected छ प्रकृति पहिलो सय वर्ष छैन। तर गम्भीर मात्र 1997 मा यो विचार। यो त, जनवरी 11 मा, दिन प्रकृति रिजर्व र राष्ट्रिय पार्क स्थापित भएको थियो थियो। Barguzin - यो संख्या पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज रूस मा स्थापित भएको थियो 1916 मा यो दिन, संयोगले रोजेका छ। Geysers को उपत्यका - यसको क्षेत्र मा एक अद्भुत ठाउँ छ।
रूस मा, यो लामो सुरक्षित क्षेत्रमा अस्तित्व छ - एक उपासनाको राजा, राजकुमार र अन्य आचरण Hunted जो सुरक्षित वन शिकार लागि जोगाउनुहुन्छ ठाउँ, छ।
तर राज्य आरक्षित पहिलो उद्देश्य एक समयमा सिर्जना गरिएको थियो। यसको सिर्जना कायम र जनसंख्या मात्र होइन वृद्धि गर्न अनुमति barguzin सेबल धेरै अन्य जनावर र बिरुवाहरु ठूलो संख्या मा देखा पर्न थाले -।
तथ्याङ्क, रिजर्व र राष्ट्रिय पार्क अनुसार रक्षा र संसारको वनस्पति र जीव को बारेमा 80% राख्ने। रूस मा त्यहाँ प्रकृति रिजर्व सयौं र 50 राष्ट्रिय पार्क भन्दा बढी छन्। यस्तो क्षेत्र कब्जा ठाउँ मामलामा, रूसी संघ पहिलो अन्य देशहरूमा तुलनामा रैंकों। सुरक्षित क्षेत्रको कुल क्षेत्र 200 मिलियन हेक्टरमा छ। देश को 12% - र यो न थप न त कम छ। त्यसैले, रूस सुरक्षित क्षेत्रको एक विशाल क्षेत्र बढ्दै छ, किनभने रिजर्व को विश्व दिनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
पर्यावरण संरक्षण मा व्यवस्था
हामी प्रत्येक बाँच्न र स्वस्थ वातावरणमा अवस्थित अधिकार छ। तर, हामी हुनुपर्छ:
प्रकृति र वातावरण र सुरक्षा।
चरम frugality संग प्राकृतिक धन व्यवहार गर्छन्।
को व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण प्रकृति को क्षेत्र मा राज्य को नीति कानुनी आधार परिभाषित र यसलाई सीधै सम्बन्धित। अधिकारी, सामाजिक-आर्थिक समस्या समाधान प्राकृतिक स्रोतको जगेर्ना गर्न योगदान, र यति मा .. यो सबै वर्तमान र भविष्य पुस्ताका आवश्यकता पूरा गर्न गरेको हुनुपर्छ।
आरक्षित - यो के हो?
Equate रिजर्व र राष्ट्रिय पार्क सक्दैन - यो नै कुरा छैन। एक मनाइन्छ छुट्टी पनि छ विशेष गरी कि - दिन रिजर्व र राष्ट्रिय पार्कहरू को, त्यसैले यी दुई नाम भेद गर्न आवश्यक छ। आरक्षित - भूमि वा पानी राज्य द्वारा सुरक्षित को एक षड्यन्त्र, आर्थिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्छ जो को सीमाहरु भित्र प्राकृतिक जटिल। त्यसैले यसलाई सुरक्षित क्षेत्रमा निश्चित थियो जो एक अनुसन्धान संस्थाले, भनिन्छ गर्न सकिन्छ। रूस मा 80 प्रकृति रिजर्व र खेल फारमहरु छन्। तिनीहरूलाई मा प्राकृतिक निष्ठा विघटन गर्न सक्ने, गतिविधि हरेक प्रकारको निषेध गरिएको छ।
"राष्ट्रिय निकुञ्ज" को अवधारणा
रूसी संघ मा, सुरक्षित वस्तुहरु को गठन - संरक्षण को एक परम्परागत र प्रभावकारी रुप हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज - एक पानी क्षेत्र वा इलाका अद्वितीय जसमा प्राकृतिक वस्तुहरु सुरक्षित छन्। राष्ट्रीय देखि पार्क रिजर्व आगंतुकों यसको क्षेत्र मा अनुमति हो भन्ने तथ्यलाई द्वारा विशेषता छ। कडाई नामित क्षेत्रमा मात्र आराम र कदम अनुमति छन्। यी नियमहरूको उल्लंघन विशाल जरिवाना र आपराधिक पेनाल्टी entail।
रिजर्व र राष्ट्रिय पार्क बारे
यी क्षेत्रहरु वन्यजन्तु सम्पदा जगेर्ना एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यी राज्य व्यवस्था द्वारा संरक्षित वस्तुहरू छन्। र रक्षा र प्राकृतिक वस्तुहरू कदर रिजर्व को दिन र राष्ट्रिय पार्कहरू मा मात्र। तिनीहरूले स्थायी मा संलग्न छन्। ecologists र जीवशास्त्रीहरूको: - गार्ड सहित इलाका अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूले को विषय हो। तिनीहरूले जनावर र बिरुवाहरु, आफ्नो वृद्धि गतिशीलता र आपसी अस्तित्वको आबादी अध्ययन।
सबै environmentalists क्यालेन्डर मा यस मिति हालै देखा पर्नुभयो र पछि एउटा अनौपचारिक छुट्टी छलफल गरिएको छ। यो धेरै संगठनों को पहल मा रूसी संघ हरेक वर्ष मनाइन्छ। जनवरी 11 (दिन रिजर्व र राष्ट्रिय पार्कहरू को) सुरक्षित क्षेत्रमा सम्बन्धित मुद्दाहरू मा समाज को ध्यान पर्यावरण ध्यान। साथै, जसको कर्मचारीहरु को एक पेशेवर छुट्टी काम गतिविधि प्राकृतिक वस्तुहरु को सुरक्षा सम्बन्धित छ। बारेमा 11,500 मान्छे को देश मा यस्तो मान्छे को कुल संख्या। यसलाई जनवरी 11 मा, तिनीहरूले पर्यावरण संरक्षण गतिविधिहरु गर्न उल्लेखनीय योगदान लागि विभिन्न पुरस्कार दर्शाउन थियो।
रिजर्व र राष्ट्रिय पार्क, संगठन सयौं र हजारौं को दिन मा व्यक्तिहरूलाई रूस ज्योति। आखिर, ecologists को दैनिक र अक्सर selfless काम रूस को क्षेत्र मा, प्रकृति को आफ्नो प्राकृतिक फारम अद्वितीय परिदृश्य मा भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ वनस्पति र जीव को विविधता। पुस्तकालय पारिस्थितिकी, प्रकृति, पशु सुरक्षा को समस्या समर्पित पुस्तक प्रदर्शनी भ्रमण गर्न सबैलाई निमन्त्रणा। धन जुटाउने आयोजित दान घटनाहरू। प्राकृतिक स्रोतहरू दिन हेरविचार र प्रयोग गर्नुहोस्।
रिजर्व र राष्ट्रिय पार्क को सबै-रूसी दिन विभिन्न लेक्चर र सम्मेलन हो। तिनीहरूले प्राकृतिक स्रोतहरू संरक्षण उद्देश्य मुख्य गतिविधिहरु हाइलाइट। प्रकृति र यसको सुरक्षा टेलिभिजन प्रसारण कार्यक्रम। सडकमा मा बाहिर पत्रक, सौंपन पात्रो, यो विषय सम्बन्धित पुस्तिका।
राष्ट्रिय पार्क र रिजर्व - यो दुनिया भर यात्री लागि मनपर्ने गन्तव्य हो। तिनीहरूले यसको मूल अवस्था मा संरक्षित छ, र यो दिन, त्यसैले हामी प्रत्येक responsibly र ध्यानपूर्वक यी वस्तुहरु बुझाउँछ पर्छ।
जो मरुभूमिमा बाँच्न? हामी सिक्न!
खैरो बाँदर, वा संसारमा सबै भन्दा ठूलो ब्वाँसो
बर्ड Accipitridae परिवार। सबैभन्दा प्रमुख प्रतिनिधिहरु को विवरण
र कसरी wasps खान के गर्ने?
डबल-पक्षीय टास्ने टेप प्याकेजिङ, एल्यूमीनियम, पारदर्शी
म सुन्दर हुन चाहनुहुन्छ, वा कि यो गर्भावस्था को समयमा कपाल डाई गर्न सम्भव छ
"Yodofol": दबाइ को प्रयोगको लागि निर्देशन
राम्रो तरिका: स्याउ मा घर कसरी सुक्खामा
बेल्ट गर्म Shapers Slimming: डाक्टर को समीक्षा
खुट्टा को खुला भंग कस्तो व्यवहार गर्न
होटल सेतो पर्ल सूट4* (भारत / गोवा): फोटो र समीक्षा
मोमबत्ती sintomitsinovoy। प्रयोग, contraindications, समीक्षा
कसरी खर्च बिना 30 दिन भित्र थप ग्राहकहरु आकर्षित गर्न
सेन्ट पीटर्सबर्गको अविश्वसनीय पुल